डुबानमुद्दा सेलायो, संशोधन मुद्दा उठ्यो
भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएका सीमावर्ती बाँध, तटबन्धका कारण नेपालका भूभाग डुबानमा परेको र बाढीपहिरोको जोखिम बढेको भनेर संसदमा कुरा उठ्यो र केही सांसदले कानुनबिपरित भारतले निर्माण गरेका बाँध भत्काउनु पर्ने कुरा उठाए । केही सांसदले त अन्तर्राष्ट्रय अदालतसम्म जानुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे । केही दिन निकै तातेको संसद एकाएक सेलायो र अहिले संसद संविधान संशोधनको दफावार छलफलतिर लागेको छ ।
संसद यसैगरी तात्छ र सेलाउँछ । पर्दापछाडिबाट कसले तातो संसदमा पानी हाल्छ र संसद चिस्सिन्छ थाहै हुन्न । प्रधानमन्त्री भारत जान लागेका छन्, तातेको संसदले त्यो तातो विषयलाई एजेण्डाका रुपमा लैजान दबााब दिएको भए, प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न सक्थे । संसद नै सेलाएपछि तातो विषय होइन, उही खानपिन, फोटो सेसन र सम्बन्ध बलियो भनेर फर्कने न हो ?
यी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुन हुन् । यिनैले भारतले बाँध भत्काउन नमाने अन्तर्रार्िष्ट्रय कानुनको सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्ने प्र्रस्ताव गरेकी थिइन् । सानो पार्टीको सांसद, सानै श्वर, टेबुल ठटाए, रेकर्ड भयो सकियो ।
संसदमा बोलेका कुरा रेकर्ड हुन्छ, त्यो रेकर्ड कसले कहिले सुन्छ, सरकारले त्यसको महत्व बुझेको कुनै तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । रेकर्ड गराएर बाजेले घीउ खाएका थिए, मेरो हात सुँघ सुँघ भन्नेबाहेक त्यो रेकर्डको अर्थ कति हुन्छ ?
नेपाल डुबिरहेको छ । हरेक वर्ष नेपाल डुब्छ, नेपाली मर्छन् । यसको दीर्घकालीन निरुपण कसरी हुन्छ, संसदमा यसपटक पनि निष्कर्ष निस्केन । भारत सिमानामा बाँध र सडक बनाउँदै जाने र नेपाल डुबिरहने, मरिरहने, धनजनको क्षति बेहोरिरहने ? आश्चर्य यसविरुद्ध मधेसका कुनै दल अथवा नेताले चुँइक्क बोलेनन् । योभन्दा अर्को आश्चर्य के हुनसक्छ ?
झापादेखि कञ्चनपुरसम्म डुबान समस्या देखियो । बाढी पसेर मधेसलाई हाहाकारमा पारिदियो । प्राकृतिक बहावलाई रोकेर भारतले जुन अमानवीय काम गरेको छ, त्यसको निन्दा अव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उठ्नुपर्छ ।